Ezikiel 48 Baịbụl Nsụgharị Ụwa Ọhụrụ nke Dị n'Ịntanet
48 “Ndị a bụ aha ebo dị iche iche. Malite na nsọtụ ebe ugwu, n’akụkụ dị n’ụzọ e si aga Hetlọn+ ruo n’ebe e si abanye Hemat,+ Heza-inan,+ bụ́ ókè nke ala Damaskọs n’ebe ugwu, n’akụkụ Hemat; ọ ga-enwekwa ókè n’ebe ọwụwa anyanwụ nakwa n’ebe ọdịda anyanwụ. Dan+ ga-eketa otu mpaghara. 2 N’ókè nke ala Dan, malite n’ókè dị n’ebe ọwụwa anyanwụ ruo n’ókè dị n’ebe ọdịda anyanwụ, Asha+ ga-eketa otu. 3 N’ókè nke ala Asha, malite n’ókè dị n’ebe ọwụwa anyanwụ ruo n’ókè dị n’ebe ọdịda anyanwụ, Naftalaị+ ga-eketa otu. 4 N’ókè nke ala Naftalaị, malite n’ókè dị n’ebe ọwụwa anyanwụ ruo n’ókè dị n’ebe ọdịda anyanwụ, Manase+ ga-eketa otu. 5 N’ókè nke ala Manase, malite n’ókè dị n’ebe ọwụwa anyanwụ ruo n’ókè dị n’ebe ọdịda anyanwụ, Ifrem+ ga-eketa otu. 6 N’ókè nke ala Ifrem, malite n’ókè dị n’ebe ọwụwa anyanwụ ruo n’ókè dị n’ebe ọdịda anyanwụ, Ruben+ ga-eketa otu. 7 N’ókè nke ala Ruben, malite n’ókè dị n’ebe ọwụwa anyanwụ ruo n’ókè dị n’ebe ọdịda anyanwụ, Juda+ ga-eketa otu. 8 N’ókè nke ala Juda, malite n’ókè dị n’ebe ọwụwa anyanwụ ruo n’ókè dị n’ebe ọdịda anyanwụ, onyinye unu ga-enye ga-adị puku kubit iri abụọ na ise n’obosara,+ ogologo ya ga-ahakwa ka otu n’ime ibé ala ndị ahụ malite n’ókè dị n’ebe ọwụwa anyanwụ ruo n’ókè dị n’ebe ọdịda anyanwụ. Ebe nsọ ahụ ga-adịkwa n’etiti ya.+ 9 “Onyinye unu ga-enye Jehova ga-adị puku kubit iri abụọ na ise n’ogologo, dịkwa puku kubit iri n’obosara. 10 A ga-enyekwa ndị nchụàjà onyinye dị nsọ dị ka ndị a.+ Ọ ga-adị puku kubit iri abụọ na ise n’ebe ugwu, obosara ya ga-adị puku kubit iri n’ebe ọdịda anyanwụ, obosara ya ga-adịkwa puku kubit iri n’ebe ọwụwa anyanwụ, ogologo ya adịrị puku kubit iri abụọ na ise n’ebe ndịda. Ebe nsọ nke Jehova ga-adịkwa n’etiti ya.+ 11 Ọ ga-abụ nke ndị nchụàjà, bụ́ ụmụ Zedọk+ ndị e doro nsọ, ndị nọ na-arụrụ m ọrụ, ndị na-akpafughị mgbe ụmụ Izrel kpafuru, dị nnọọ ka ndị Livaị kpafuru.+ 12 Ha ga-enwetakwa onyinye nke si n’ala ahụ e nyere n’onyinye dị ka ihe kasị nsọ, n’ókè nke ala ndị Livaị.+ 13 “Ndị Livaị ga-enweta+ ala nke ga-adị puku kubit iri abụọ na ise n’ogologo, dịrịkwa puku kubit iri n’obosara, n’akụkụ ala ndị nchụàjà; ogologo ya dum ga-adị puku kubit iri abụọ na ise, obosara ya adịrị puku kubit iri.+ 14 Ha agaghị ere nke ọ bụla n’ime ya ere, ha agaghịkwa ewere ya gbanwere ihe ọzọ, ha agaghịkwa eme ka ala ọma ahụ si n’aka ha pụọ; n’ihi na ọ bụ ihe dị nsọ nye Jehova.+ 15 “Nke fọdụrụ, ya bụ, nke dị puku kubit ise n’obosara, tinyere puku kubit iri abụọ na ise ahụ, ga-abụrụ ndị obodo ihe rụrụ arụ,+ a ga-eji ya mere ebe obibi na ebe anụ na-ata nri. Obodo ahụ ga-adịkwa n’etiti ya.+ 16 Nke a bụ otú obodo ahụ ga-aha: ókè nke dị n’ebe ugwu ga-adị puku kubit anọ na narị ise, ókè nke dị n’ebe ndịda ga-adị puku kubit anọ na narị ise, ókè nke dị n’ebe ọwụwa anyanwụ ga-adị puku kubit anọ na narị ise, ókè nke dị n’ebe ọdịda anyanwụ ga-adịkwa puku kubit anọ na narị ise. 17 Obodo ahụ ga-enwekwa ebe anụ na-ata nri,+ narị kubit abụọ na iri ise n’ebe ugwu, narị kubit abụọ na iri ise n’ebe ndịda, narị kubit abụọ na iri ise n’ebe ọwụwa anyanwụ, narị kubit abụọ na iri ise n’ebe ọdịda anyanwụ. 18 “Ihe ga-afọdụ n’ogologo ya ga-aha nnọọ ka onyinye ahụ dị nsọ,+ puku kubit iri n’ebe ọwụwa anyanwụ, puku kubit iri n’ebe ọdịda anyanwụ. Ọ ga-ahakwa kpọmkwem ka onyinye ahụ dị nsọ. Mkpụrụ ala ahụ mepụtara ga-abụ ihe ndị na-ejere obodo ozi ga na-eri.+ 19 Ọ bụ ndị si n’ebo niile nke Izrel, bụ́ ndị na-ejere obodo ahụ ozi, ga na-akọ ubi na ya.+ 20 “Onyinye a dum dị puku kubit iri abụọ na ise n’ogologo, dịrịkwa puku kubit iri abụọ na ise n’obosara. Unu ga-enye ala nke akụkụ anọ ya hà nhata ka ọ bụrụ onyinye dị nsọ, tinyere ala nke obodo ahụ. 21 “Ihe ọ bụla fọdụrụ ga-abụ nke onyeisi,+ n’otu akụkụ nakwa n’akụkụ nke ọzọ nke onyinye ahụ dị nsọ nakwa n’ala obodo ahụ,+ n’akụkụ onyinye ahụ nke dị puku kubit iri abụọ na ise ruo n’ókè dị n’ebe ọwụwa anyanwụ; nakwa n’ebe ọdịda anyanwụ n’akụkụ ala ahụ nke dị puku kubit iri abụọ na ise ruo n’ókè nke dị n’ebe ọdịda anyanwụ.+ Dị nnọọ ka ihe ebo dị iche iche ketara, otú ahụ ka onyeisi ga-eketa. Onyinye ahụ dị nsọ na ebe nsọ nke dị n’Ụlọ ahụ ga-adị n’etiti ya. 22 “Ala ndị Livaị na ala obodo ahụ ga-adị n’agbata nke onyeisi. Ala dị n’agbata ókè ala Juda+ na ókè ala Benjamin ga-abụ nke onyeisi. 23 “A bịa n’ebo ndị ọzọ, malite n’ókè nke dị n’ebe ọwụwa anyanwụ ruo n’ókè nke dị n’ebe ọdịda anyanwụ, Benjamin+ ga-eketa otu mpaghara. 24 N’akụkụ ókè nke ala Benjamin, malite n’ókè dị n’ebe ọwụwa anyanwụ ruo n’ókè dị n’ebe ọdịda anyanwụ, Simiọn+ ga-eketa otu. 25 N’akụkụ ókè nke ala Simiọn, malite n’ókè dị n’ebe ọwụwa anyanwụ ruo n’ókè nke dị n’ebe ọdịda anyanwụ, Ịsaka+ ga-eketa otu. 26 N’akụkụ ókè nke ala Ịsaka, malite n’ókè dị n’ebe ọwụwa anyanwụ ruo n’ókè dị n’ebe ọdịda anyanwụ, Zebulọn+ ga-eketa otu. 27 N’akụkụ ókè nke ala Zebulọn, malite n’ókè dị n’ebe ọwụwa anyanwụ ruo n’ókè dị n’ebe ọdịda anyanwụ, Gad+ ga-eketa otu. 28 N’akụkụ ókè nke ala Gad, n’ókè nke dị n’ebe ndịda, ọ ga-adị na ndịda; ókè ya ga-amalite na Tema+ ruo ná mmiri Meribat-kedesh,+ ruokwa n’iyi ndagwurugwu,+ ruo n’Osimiri Ukwu.+ 29 “Ọ bụ ala a ka unu ga-eme ka ebo niile nke Izrel nweta dị ka ihe nketa ha site n’ife nza,+ ebe ndị a ga-abụ òkè ha,”+ ka Ọkaakaa Onyenwe anyị Jehova kwuru. 30 “Ndị a ga-abụ ụzọ a ga-esi na-apụ n’obodo ahụ: Ókè dị n’ebe ugwu ga-adị puku kubit anọ na narị ise.+ 31 “Ọnụ ụzọ ámá obodo ahụ ga-adị ole aha ebo niile nke Izrel dị, ọnụ ụzọ ámá atọ ga-adị n’ebe ugwu, ọnụ ụzọ ámá Ruben, otu; ọnụ ụzọ ámá Juda, otu; ọnụ ụzọ ámá Livaị, otu. 32 “Ókè dị n’ebe ọwụwa anyanwụ ga-adị puku kubit anọ na narị ise, nweekwa ọnụ ụzọ ámá atọ, ya bụ, ọnụ ụzọ ámá Josef, otu; ọnụ ụzọ ámá Benjamin, otu; ọnụ ụzọ ámá Dan, otu. 33 “Ókè dị n’ebe ndịda ga-adị puku kubit anọ na narị ise. Ọ ga-enwe ọnụ ụzọ ámá atọ, ọnụ ụzọ ámá Simiọn, otu; ọnụ ụzọ ámá Ịsaka, otu; ọnụ ụzọ ámá Zebulọn, otu. 34 “Ókè dị n’ebe ọdịda anyanwụ ga-adị puku kubit anọ na narị ise, ọ ga-enwe ọnụ ụzọ ámá atọ, ọnụ ụzọ ámá Gad, otu; ọnụ ụzọ ámá Asha, otu; ọnụ ụzọ ámá Naftalaị, otu. 35 “A ga-enwe puku kubit iri na asatọ gbaa gburugburu; aha obodo ahụ malite n’ụbọchị ahụ gaa n’ihu ga-abụ Jehova n’Onwe Ya Nọ n’Ebe Ahụ.”+